Meizu M3 Fanamarihana, famerenana video sy famakafakana | Androidsis
Meizu M3 Fanamarihana, famakafakana ary hevitra
Tondraky ny mpamokatra sinoa manolotra vahaolana avo lenta ny tsenan'ny finday. Io fotoana io rehefa nifanindry tamina olana ny finday finday sinoa noho ny asa tsara nataon'ny marika sasany. Ary ohatra iray mazava ny Meizu.
Rehefa nanana fotoana aho hadihadio ny Meizu Pro 6 Nazava be tamiko fa te hanolotra kalitao tsara ity mpanamboatra ity ary antoka tsara kokoa any Espana. Nanararaotra nanandrana ny vahaolana hafa nataony aho ary efa nolazaiko taminareo fa ny fihetseham-poko taorian'ilay fanadihadiana video nataoko tamin'ny Meizu M3 Note Tsy afaka naneho fiheverana bebe kokoa izy ireo.
1 Meizu dia nahavita nanjary benchmark teo amin'ny tsena noho ny kalitaon'ny vahaolana
2 Mamolavola sy manangana: telefaona sarobidy, matanjaka ary tsara tarehy
3 Toetra ara-teknika: mifanaraka amin'ny naoty ny Meizu M3 Note
4 Rindrambaiko bloatware maimaimpoana
5 Fakan-tsary izay manara-dalàna, fa tsy manavaka
6 Mpandahateny tsy be mpitia
7 Fahaleovan-tena: miaraka amin'ny Meizu M3 Note dia tsy mila bateria ivelany ianao
8.1 Sary nalaina tamin'ny fakan-tsary Meizu M3 Note
Meizu dia nahavita nanjary benchmark teo amin'ny tsena noho ny kalitaon'ny vahaolana
Nandritra ny taona maro dia hitantsika ny fitomboan'ny tandavan M, andalana terminal any ambanin'ny MX ankasitrahana, fa ny fahitana isaky ny fanavaozana dia amin'ny alàlan'ny fampiakarana marika amin'ny resaka kalitao. Ary ity M3 Note, zokin'ny M3 ity, dia ohatra iray vaovao amin'izany.
Meizu dia manao asa tena tsara ary raha mitohy amin'ny làlana iray ihany izy io dia tsy ho ela dia ho lasa benchmark eto amintsika. Avelao hangovitra ireo lehibe toa an'i Samsung na LG satria hiova ny fanelingelenana ny marika toa ny Huawei, ZTE na Meizu, raha mbola tsy nanao an'izany izy ireo, ny tsena telephony.
Mamolavola sy manangana: telefaona sarobidy, matanjaka ary tsara tarehy
Meizu niverina niloka taminy Aluminium andiany 6.000 hamoronana vatana unibody amin'ny M3 Mariho fa misy famaranana roa samy hafa ao andamosiny: voalamina eo amin'ny sisiny ambony sy ambany ary voaravaka eo ambonin'ilay fisaka, manome fikitika mahafinaritra sy ambonin'izany rehetra izany, manakana ny terminal tsy hiala eo an-tananao na eo aza ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana azy. .
Ny telefaona dia terminal lehibe, miaraka amin'ny mirefy 153,6 x 75,5 x 8,2 mm ary milanja 163 grama dia mazava fa ny efijeriny 5.5-inch dia mahatonga azy io finday sarotra ampiasaina amin'ny tanana iray.
Na izany na tsy izany ny sisiny miolaka ataovy mahazo aina tsara ny mitazona azy, na dia tsy mifintina toy ny fantsona hafa misy diagonal efijery iray aza. Ary ny antsipiriany iray hafa dia ny matevina somary matevina noho ny mahazatra, lozika ny terminal raha toa ka heverintsika ny batterie 4.100 mAh manaitra izay manome fahaleovan-tena mbola tsy nisy toa azy.
Eo anoloana no ahitantsika ny azy Efijery 5.5-inch mitazona 73%. Ny frame dia ampiasaina tsara, na dia mbola dingana iray ao ambadiky ny terminal hafa aza izy ireo, dia tsy maintsy tsiahivina fa ny telefaona manodidina ny 200 - 230 euro miankina amin'ny maodely, noho izany tsy afaka manantena telefaona manana endrika tonga lafatra isika.
Eo amin'ny farany ambany dia ny Bokotra an-trano izay misy ny asan'ny mpamaky rantsantanana. Izaho manokana dia aleoko tsara kokoa fa any aoriana no misy azy, eo ambanin'ny fakan-tsary, saingy misy ny olona maniry ny bokotra eo anoloana afaka mamoha ny telefaona rehefa mipetraka eo ambony latabatra izy io. Momba ny tsiro, ny loko.
bokotra fanaraha-maso ny volume sy ny terminal on / off Eo amin'ny ilany havia amin'ny Meizu M3 Note izy ireo. Izy rehetra dia manolotra fitsangatsanganana tsara ary mihoatra ny fanerena marina, ary koa fananganana vy izay manome fahatsapana faharetana lehibe.
Eo amin'ny ilany havia amin'ny telefaona no ahitantsika ny slot slot karatra SIM nano sy slot hafa hametahana karatra SD micro ary manitatra ny fitadidiana ny terminal. Raha eo amin'ny faritra ambany dia hitantsika ny seranana USB micro sy ny fivoahan'ny mpandahateny, ny tapany ambony dia natokana ho an'ny famoahana feo 3.5 mm. Farany dia manana tontonana aoriana izay misy ny fakantsary lehibe an-telefaona, miaraka amina flash LED roa tonta, ho fanampin'ny marika famantarana.
Raha fintinina, telefaona misy famaranana tena lafo ary mahatsapa tena tsara eo am-pelatanana. Raha dinihina ny vidiny, ny asa vitan'ny mpanamboatra amin'io lafiny io dia tena tsara, manome ny fahatsapana fa ny Meizu M3 Note dia avo lenta miaraka amin'ilay vatana vita amin'ny aliminioma.
Toetra ara-teknika: mifanaraka amin'ny naoty ny Meizu M3 Note
modely M3 Fanamarihana
Operating System Android 5.1 eo ambanin'ny sosona Meizu 5.1.3
efijery IPS 5'5 "miaraka amin'ny haitao 2.5D sy ny vahaolana feno HD 1920 x 1080 mahatratra 403 dpi
processeur Mediatek Helio P10 fotony valo (core Cortex-A 53 efatra amin'ny 1.8 GHz ary core Cortex-A53 efatra amin'ny 1 GHz)
ram Fahatsiarovana 2 na 3 GB miankina amin'ny maodely
Tahiry anatiny 16 na 32 GB miankina amin'ny maodely azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 256 GB
Fakan-tsary aoriana 13 MPX miaraka amina aperture 2.2 / autofocus / fanamafisana ny sary optika / fisehoan'ny tarehy / panorama / HDR / flash taratra LED / Geolocation / firaketana horonantsary amin'ny kalitao 1080p
Fakan-tsary mialoha 5 MPX miaraka amina aperture 2 / horonan-tsary ao amin'ny 1080p
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Tarika 3G (HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100) Tarika band 4G (1) (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 4 (1700) / 2100 (5) / 850 (7) / 2600 (8) / 900 (9) / 1800 (12) / 700 (17) / 700 (18) / 800 (19) / 800 (20) / 800 (26) / 850 (28)
Fitaovana hafa fantsom-pandrefesana / fanamafisam-peo / famaranana metaly
bateria 4100 mAh tsy azo esorina
lafiny X X 153.6 75.5 8.2 MG
lanja Gramin'ny 163
vidiny 199 na 230 euro miankina amin'ny maodely
Ahoana ny fomba fiasa miaraka amin'ny RAM 10 GB an'ny mpikirakira Helio P2? Ilay singa nalefan'i Meizu taminay hanaovana an'ity fanadihadiana ity dia manana an'ity fitaovana ity ary mila milaza aho fa tsy manana fitarainana. Miasa mikatona ny terminal ary mipoitra amin'ny multitasking tsy misy olana, tsy mahita ny taraiky mandritra ny fampiasana.
Araka ny hitanao dia izaho no lalao fitsapana izay mitaky enta-mavesatra be ary ny Meizu M3 Note dia nanosika azy ireo tsy nisy fahasarotana, mamela anao hanao ny ankamaroan'ny efijery 5.5-inch, ka raha mitady telefaona mahery ianao nefa tsy mila mamela vola be loatra aminao, ny Meizu M3 Note dia safidy tena mahaliana.
Eny, ianao Manoro hevitra anao aho handeha ho an'ny kinova miaraka amin'ny memoara 32 GB sy RAM 3 GB, Izy ireo dia 40 euro ny fahasamihafana, saingy ho hitanao izany satria ny 16 GB amin'ny andrana fitsapako dia toa zavatra tsy dia misy dikany, na toy inona na karatra micro SD azoko apetraka.
Rindrambaiko bloatware maimaimpoana
Ny Meizu M3 Note dia miaraka Android 5.1, antsipiriany izay tsy tiako, na dia soa aza fa ny interface Flyme mahazatra no tsara indrindra hitako. Tonga madio tanteraka ny telefaona, miaraka amina toolkit iray fotsiny izay mampiditra kompas, fitaratra manitatra ary zavatra hafa kely. Ny zavatra hafa rehetra tsy maintsy apetratsika amin'ny tenantsika. Misaotra anao tsy nanampy app junk.
Iray amin'ireo Fampiharana vitsy izay efa napetraka mialoha no manome fiarovana avo lenta ny M3 Note. Ary ny fampiharana Security dia manolotra fanatsarana ny fahombiazana mamela ny fanatsarana sy ny fanadiovana cache ary ny rakitra sisa tavela nefa tsy mila mametraka programa hafa.
Eto no misy anao mpamaky ny rantsantanana, sensor biometrika izay mitaky fikirakira tena marina mba hiasa tsara. Izaho, izay zatra manao azy io haingana nefa tsy be fanahiana loatra, dia nanana olana tamin'ny fanekena ny dian-tananay, fa rehefa namafa izany ary nanomboka ny dingana manaraka ny dingana sy ny fanaovan-javatra tsara, ny marina dia tsikaritro fa nisy fihatsarana.
Fizarana iray izay tiako asongadina dia Ny interface Meizu dia manakatona fampiharana sasany izay ao aoriana. Raha mividy an'ity telefaona ity ianao dia zahao tsara ny faritra fiarovana satria azo inoana fa hikatona ny WhatsApp ary tsy hahazo fampandrenesana ianao. Matokia fa mora be ny mamaha an'io olana io, misy forum an-jatony amin'ny Internet izay manazava ny toerana tokony hikasihanao ny toe-telefaona anao hamahana ny fanakatonana ny fampiharana ao ambadika.
Antsipiriany iray hafa tiako asongadina dia izany ny Meizu M3 Note dia mampiasa rafitra somary hafa kely handehanana amin'ny interface. Ohatra, hasiantsika tsindry moramora ny bokotra Home mba hihemotra indray mandeha, fanerena mitohy kokoa handeha mivantana amin'ny efijery lehibe, na hikorisa ny sisin'ny rantsan-tanantsika hamoaka multitasking isika. Rafitra iray izay, rehefa zatra azy io, dia tena azo ampiharina sy mahazo aina.
Fakan-tsary izay manara-dalàna, fa tsy manavaka
Ny M3 Note dia manana efijery iray a Tontonana IPS 5.5 inch izay mahatratra ny vahaolana amin'ny 1080 x 190 teboka sy 403 ppp. Ny efijery dia manana antsipiriany tsara ary manome loko maranitra, noho ny mari-pana amin'ny efijery azo ekena, na dia tsy dia tsara loatra aza ny famirapiratanana.
Indraindray dia tsikaritro fa mitaky fotoana hanitsiana ny famirapiratany ho azy ny terminal, indrindra amin'ny andro tena mazava be, noho izany dia voatery nandeha tany amin'ny fanovana aho ary nampitombo ny famirapiratanana tanana.
ny 450 nitsena Mihaona mihoatra ny ampy izy ireo, na dia somary ambanin'ny telefaona hafa aza izy ireo, saingy eo antenatenany, ny asa ato amin'ity fizarana ity dia mihoatra ny ampy. Mariho fa ny zoro fijerena dia marina kokoa, manasa antsika hankafy ny atiny multimedia amin'ny diagonal 5.5-inch.
Mpandahateny tsy be mpitia
Ny ankamaroan'ny telefaona dia manana ny mpandahateny eo amin'ny fotony, ka mahatonga antsika hametaka ny output audio rehefa milalao isika, ary indrisy fa ny Meizu M3 Note dia nanaraka ny zotram-pifandraisana maro an'isa.
Olana amin'ny vahaolana sarotra, raha tsy apetrakao amin'ny faritra anoloana ireo mpandahateny mampitombo ny haben'ny terminal. Ny milaza izany mahantra dia tsy dia tsara loatra amin'ny ankapobeny, somary mampihena ny traikefa rehefa mijery atiny multimedia. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiasanao écouteur hankafizanao mozika, horonan-tsary na lalao amin'ity terminal ity.
Fahaleovan-tena: miaraka amin'ny Meizu M3 Note dia tsy mila bateria ivelany ianao
Ny iray hafa manasongadina an'ity telefaona ity dia ny batterie 4.100 mAh mahavariana izay manolotra fahaleovan-tena tena tsara ka mahatonga ny isa Meizu M3 Note isa vitsivitsy.
Miaraka amin'ny hetsika mahazatra, amin'ny fampiasana Spotify adiny iray isan'andro, fitetezana Internet, famaliana mailaka ary fampiasana serivisy fandefasana hafatra eo noho eo ny bateria dia naharitra adiny 25 tamiko.
Midika ho fahaleovan-tena tena tsara izy io izay manome toky fa tonga any an-trano miaraka amin'ny bateria 30% farafaharatsiny. na dia Indraindray aho dia nampiasa ilay terminal nandritra ny roa andro nefa tsy voatery andoavako izany, antsipiriany ho raisina.
Mazava izany Ny asa nataon'i Meizu hanatsarana ny batterie an'ny M3 Note hatramin'ny farany ambony dia tsara indrindra, mamela antsika hamela ny bateria ivelany any an-trano satria tsy mila izany mihitsy isika.
Ny Meizu M3 Note dia manana Fakan-tsary eo anoloana 5 megapixel misy f / 2.0, raha ny fakan-tsary any aoriana kosa dia a Sensor 13 megapixel miaraka amina f / 2.2 aperture. Tena tsara ny fitondran-tenany, manao sary avo lenta, miaraka amin'ny loko mazava sy voajanahary, indrindra amin'ny tontolo mazàna.
Raha te haka sary amin'ny tontolo misy hazavana antonony na tsy mazava isika dia miseho ny tabataba ary, na dia ny feon-jiro LED taratra roa manampy be dia be, ambany ny kalitao. Mazava ho azy, ny rindrambaiko fakantsary, izay ahafahanao manitsy ny ankamaroan'ny masontsivana amin'ny maody amin'ny tanana, dia ahafahantsika manatsara ny fakana an-tsary izay raisinay.
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny fakan-tsary izay maka sary tena tsara amin'ny maody mandeha ho azy raha mbola manana taratra hazavana tsara isika fa saika manery antsika hianatra ny tsiambaratelon'ny maody fampiasa amin'ny tanana mba hahafahana mamintina tanteraka ny fahafahan'ny fakantsary Meizu M3 Note amin'ny toe-java-maivana.
Manoro hevitra anao aho handany fotoana fohy amin'ny fidirana amin'ny masontsivana toy ny ISO na ny hafainganam-pandehan'ny shutter hahafahanao manararaotra ny fahafaha-manao feno an'ny fakan-tsary Meizu M3 Note. Farany handao anao aho miaraka amina andian-tsary nalaina tamin'ny telefaona, izy rehetra ireo tamin'ny maody mandeha ho azy, mba hahitanao ireo mety ho natolotry ny fakantsary an'ity terminal ity.
Sary nalaina tamin'ny fakan-tsary Meizu M3 Note
tsy misy zoom
miaraka amin'ny zoom
Ny fitsangatsanganana eo afovoany dia fanamby sarotra hatrany ary i Meizu dia mahatratra azy noho ny m3 Note, terminal misy famaranana tsara, mpamaky ny rantsantanana ary vidiny mirary tokoa.
Hahita telefaona vitsivitsy ianao izay manana efijery 5.5-inch ary azonao atao ny mividy amin'ny fivarotana ara-batana na amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpanamboatra antoka any Espana.
Ny filokana an'i Meizu dia manome fandrisihana tena mahaliana izay mahatonga ity telefaona ity iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra raha mitady phablet matanjaka ianao, miaraka amin'ny fizakan-tena lehibe ary tsy mila mandany vola be.
Fa mahita buts, Tsy manana rafitra famerana haingana aho, izay mety ho tsara raha raisintsika ny fahaleovan-tenany mahavariana, na ny kalitaon'ny mpandahateny, fa mila milaza aho fa ity Meizu M3 Note ity dia telefaona manana kalitao tsara noho ny vatany tsy mitovy amin'ny vita amin'ny aliminioma sy fa tsy izany dia handiso fanantenana anao.
Meizu m3 Fanamarihana
Vidim-bola tsy mampino
Bateria tsy manam-petra
Ny mpandahateny dia miala kely amin'izay irina
Tsy manana rafitra famerana haingana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Meizu M3 Fanamarihana, famakafakana ary hevitra
Novidiko ho an'ny zanako lahy io, safidy kalitao / vidiny no safidy tena tsara. Miandry ny fanavaozana ny Flyme aho, misy kilema ny kinova ankehitriny. Tsy mamela anao hanisy tanana APN amin'ny tanana izy, noho izany raha ny fitsipika ho anao izay mampiasa OVM androany dia tsy manome soso-kevitra azy io aho, ho sisa tavela amin'ny angon-drakitra finday voaheloka ianao.
ZTE Axon 7, ity ny finday avo lenta Android finday avo indrindra miaraka amin'ny sandam-bola
Samsung dia manao ny smartwatches mifanaraka amin'ny "fahavalo"